Dom » Entries tagged with "usa"
Fotoana izao ho an'i Xiaomi - manafika an'i Shina i Trump
Shina, USA, xiaomi
Andro vitsivitsy sisa dia hifarana ny fe-potoam-piasan'i Donald Trump. Na izany aza, tsy manova ny zava-misy izany fa mbola manafika an'i Shina i Xiaomi, na ny marimarina kokoa Xiaomi, hiala. Amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny lisitra mainty. Inona avy ireo fiatraikan'ny fidirana ao amin'ny Huawei amin'ny ...
Ny teknolojia vaovao an'ny tafika amerikana dia ny manampy azy ireo "Hamaky saina"
Ny baiko manokana fanaovan-tserasera amerikanina dia manohy ny ezaka hataony mba hanampy ny miaramila ao. Vao haingana izy ireo dia nampiseho fanavaozana tsy mahazatra izay manampy ny miaramila amin'ny fanenjehana miaramila any ivelan'i Etazonia. Ary mahalasa kely sahala amin'ny "Mamaky saina" izany. Ary ...